Ny kinova vaovao an'ny GNU Guix 1.1 manager manager dia vonona | Avy amin'ny Linux
Vao tsy ela se nanambara ny famoahana ny kinova vaovao an'ny GNU Guix 1.1 manager manager sy ny fizarana GNU / Linux natsangana teo ambonin'ity fototra ity. Ny fizarana pmamela ny fametrahana ho rafitra fiasa irery amin'ny rafitra virtoaly, ao anaty kaontenera sy amin'ny fitaovana mahazatra, ary koa ny fanombohana amin'ny fizarana GNU / Linux efa napetraka, miasa ho toy ny sehatra hampiharana fampiharana.
Ilay mpampiasa manana endri-javatra toy ny kaonty fiankinan-doha, asa tsy misy faka, miverina amin'ny kinova etsy ambony raha sendra olana, fitantanana fikirakirana, fanaovana klona ny tontolo iainana (mamorona kopia marina ny tontolon'ny rindrambaiko amin'ny solosaina hafa), sns.
Raha ny GNU Guix fonosana mpitantana kosa dia miorina amin'ny zava-bitan'ny tetikasa Nix ary ho fanampin'ny asa fitantanana fonosana mahazatra, manohana endri-javatra toy ny fanatanterahana fanavaozana ny transactional, ny fahaiza-mamerina ny fanavaozana, miasa nefa tsy mahazo tombo-tsoa ho an'ny superuser, mombamomba ny mpanohana mifandraika amin'ny mpampiasa tsirairay, ny fahaizana mametraka andiany marobe amin'ny programa iray, ny fomba fanangonana fako (famantarana sy fanesorana ireo kinova fonosana tsy ampiasaina).
Ho fanampin'izany, aroso mba hampiasa fiteny avo lenta manokana miompana amin'ny lohahevitra sy ny singa Guile Scheme API hamaritana ireo tranga momba ny fivorian'ny fampiharana sy ny fitsipiky ny fananganana fonosana. Ireo singa ireo dia ahafahanao manao ny asa fitantanana fonosana rehetra ao amin'ilay schema amin'ny fiteny fandaharana miasa.
1 Inona no vaovao ao amin'ny GNU Guix 1.1?
2 Ampidino ny Guix 1.1
Inona no vaovao ao amin'ny GNU Guix 1.1?
Ity kinova ity dia mifandraika amin'ny fanoloran-tena 14.078 natao nandritra ny 11 volana nataon'ny olona 201. Ahitana fiasa vaovao maro, fampifandraisan'ny mpampiasa sy ny fahombiazany, ny fanatsarana ary koa ny fanitsiana bibikely.
Anisan'ireo zava-baovao farany miavaka, afaka hitantsika izany Nanampy rafitra ho an'ny fanandramana installer graphique mandeha ho azy. Ny installer izao dia mivondrona amin'ny rafitra fampidirana mitohy ary notsapaina tamin'ny configurations samy hafa (fizarazarana root sy tsy miovaova, fametrahana amin'ny birao sns.).
Didy vaovao roa no nampiana, iray amin'izy ireo dia "guix rafitra mamaritra«, Izay ahafahana manombatombana ny fiovana eo amin'ny tranga roa samy hafa ao amin'ny rafitra, ny baiko hafa nampiana dia"Guix deploy" izay natao hampiharana ny famenoana solosaina maromaro amin'ny fotoana iray, ohatra, tontolo vaovao ao amin'ny VPS na rafitra lavitra azo alefa amin'ny SSH.
Afaka mahita ny nanampy serivisy vaovao: auditd, fontconfig-file-system, getmail, gnome-keyring, kernel-module-loader, knot-resolver, mumi, nfs, nftables, nix, pagekite, pam-mount, patchwork, polkit-wheel, provance, pulseaudio, saina, singularity, usb-modewitch.
koa kinova rindrambaiko nohavaozina ao anaty fonosana 3368, Fonosana vaovao 3514 nampiana, ao anatin'izany ny kinova nohavaozina xfce 4.14.0, gnome 3.32.2, mate 1.24.0, xorg-server 1.20.7, bash 5.0.7, binutils 2.32, kaopy 2.3.1, emacs 26.3, fanazavana 0.23.1, gcc 9.3 .0, gimp 2.10.18 .2.29, glibc 2.2.20, gnupg 1.13.9, go 2.2.7, guile 68.7.0, icecat 0-guix1-preview3.7.0, icedtea 6.4.2.2, libreoffice 5.4, linux-libre 31. 12.33, openjdk 5.30.0, perl 3.7.4, python 1.39.0, ary oxide XNUMX.
Amin'ireo fanovana hafa misongadina amin'ity kinova vaovao ity dia:
Ny fanohanana sary ho an'ny Singularity sy Docker dia nampiana amin'ny baiko guix pack.
Ny baiko "guix time-machine" dia nampiana, ahafahanao miverina amin'ny kinova fonosana voatahiry ao amin'ny arisivan'ny Heritage Heritage.
Ny safidy "–target" dia nampiana tamin'ny "guix system", manome tohana ampahany amin'ny fananganana hazo fijaliana;
Guix dia ampiharina amin'ny alàlan'ny Guile 3, izay misy fiatraikany tsara amin'ny fampisehoana.
Ny tabilao fiankinan-doha dia voafetra amin'ny singa mihena amin'ny loharanom-pahalalana binary ao amin'ny fiangonana (voa), izay dingana lehibe mankany amin'ny fampiharana bootstrap voamarina tanteraka.
Nanangana rafitra ho an'ny Node.js, Julia, ary Qt mba hanamorana ny fonosana fanoratana ho an'ireo fampiharana mifandraika amin'ireo tetikasa ireo.
Ho fanampin'izay, ny mpanoratra ny fonosana antoko fahatelo dia manana fitaovana hanoratana hafatra vaovao azon'ny mpampiasa vakiana amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ilay baiko hoe "guix pull –news".
Ampidino ny Guix 1.1
Ireo sary apetraka amin'ny USB Flash (241 Mb) na ny fampiasana azy ireo amin'ny rafitra virtualization (479 Mb), dia azo alaina amin'ny maritrano i686, x86_64, armv7 ary aarch64.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tanisao ny kinova vaovao an'ny mpitantana fonosana GNU Guix 1.1